13 xubnood oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn Mareykanka ka geystay gobolka Shabeellaha Hoose - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomalia13 xubnood oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn Mareykanka ka geystay gobolka Shabeellaha Hoose
13 xubnood oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn Mareykanka ka geystay gobolka Shabeellaha Hoose
February 3, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Dagaalyahano Al-Shabaab ah. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ayaa sheegay in 13 xubnood oo katirsan ururka Al-Shabaab ay ku dileen duqeyn ka dhacday meel 48 kiilomitir u jirta magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa bayaan ku sheegay in duqeyntu ay Jimcadii ka dhacday meel u dhow deegaanka Gandarshe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Bayaanka ayaa intaas ku daray in dagaalyahanada Al-Shabaab ay Gandarshe u adeegsadaan meel ay ku diyaariyaan qaraxyada ay ka fuliyaan Muqdisho.
Dhowr duqeyn oo Mareykanku ka geysteen bishii December ee sanadkii tagay meel u dhow Gandarshe, ayaa lagu dilay 62 dagaalyahan oo Al-Shabaab ah iyaga oo isu diyaarinayay in ay weerar ku qaadaan saldhig ay leeyihiin ciidamada Soomaaliya.
Kani waa duqeyntii 10-aad oo sanadkan uu Maraykanku ka fuliyo gudaha Soomaaliya. Sanadkii la soo dhaafay ayaa Mareykanku ka geystay ku dhawaad 50 duqeymood oo ka dhan ahaa Al-Shabaab gudaha Soomaaliya.
Khamiistii, 24 dagaalyahan oo Al-Shabaab ah ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya.
September 10, 2018 Lix qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay xarunta degmada Hodan ee Muqdisho
Madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo magacaabay qaar katirsan golihiisa wasiiradda